Kacaanka Carwooyinka Buugaagta sidii SYL dib ma u nooleyn karaa Soomaali mid ah? – Radio Daljir
Luulyo 23, 2019 7:34 b 0
Markii la aasaasay ururka gobanimadoonka ee SYL sanadkii 1943, waxaa Soomaaliya u kala qaybsanayd shan, si xor ah la isuguma gudbi karayn. Taasi waxay keentay in dhallinyartii SYL ay samaystaan xarumo iyo naadiyo ay ku kulmaan, kagana tashadaan inay la yimaadaan riyo Soomaaliya oo madax banaan.
Todobaadan iyo lix sano kadib, Soomaaliya intii xorta noqotay, waxay u kala qoqoban tahay degaanno maamullo ku dhisan qabaa’il ka taliyaan, waxaa kale oo jira ururka Alshabaab oo isna maamula dhul ballaaran oo koonfurta iyo bartamaha wadanka ah. Waxa adag inaad isaga gudubto gobollada wadanka, degmo ilaa degmo, waxayna dhibaato ku noqotay dhallinyarada Soomaaliyeed oo hamigoodu yahay inay wadankooda si nabad ah ugu noolaadaan, gobolkay doonaan u tamashle tagaan.
Carwooyinka buugta ee sanadkasta qabsooma, magaalooyin hore lehna ku soo biirayaan ayaa u muuqda inay yihiin fursadda keliya ee ay isugu yimaadaan dhallinyartu, iskuna waydiiyaan waxa keenay in iyagoo dal qura ah ay u la’yihiin qaab ay isugu imaan karaan, dhibta haysatana wax iska waydiiyaan.
Bandhig buugeedkii ugu danbeeyey wuxuu ahaa kii Kismaayo ka qabsoomay 7 ilaa 9kii July 2019, waxaana hadda socda ka Hargeysa, iyadoo ay safka ku soo jiraan Muqdisho, Garoowe, Cadaado, Beledwyne iyo Baydhabo. Barnaamijyadaan badankooda waxaa qorsheeya naadiyo wax akhris oo dhallinyaro isu tagtay samaysteen, ganacsatadu door weyn oo mid dhaqaale iyo taakulo toona kuma lahan.
Soo bandhigista buugta waxaa dheer oo dhinac socdo dood cilmiyeedyo iyo hal abuur suugaaneed oo lagu cabiro wadaniyadda, wax qabadka bulshada, toosinta dhaqanka, is aaminka iyo wax wada qabsiga. Bandhigyaduna waxay noqdeen fursaddaha ugu qaalisan ee dhallinyarta Soomaaliyeed helaan, markay noqoto isu imaatin iyo madal furan oo ay ka helaan wax ka duwan waxa dhegahoodu ka maqlaan siyaasiyiinta gobolladay ku nool yihiin ka taliya, taasoo ah ereyo xanaf leh oo ku aadan iska dhicinta qof kale oo Soomaali ah, waxay ku daremaan xornimo iyo inay hadli karaan.
Su’aasha dhalinyaro ka timid gobollada wadanka oo ku sugnayd carwadii Kismaayo is weydinayeen mar ay sheekaysanayeen waxay ahayd, “Horay ma u jirtay bas ka baxa Kismaayo oo taga Muqdisho”, inay jirtay oo baska Muqdisho ka soo safraa uu galabkii imaan jiray Kismaayo, wax jiray ayey ahayd, gaariga Jilib canbaha ka qaadaa Hargeysa laba habeen ka yar ayuu u socon jiray, wax cabsi ahna ma qabin, dhallinyartase inay taas maqalaan waxay u tahay wax aysan rumaysan karin (oday ka sheekee).
Waxay layaab ula noqonaysaa waa waxa hadda taagan ee ay arkayaan oo ah Kismaayo iyo Muqdisho gaadiid badan hadda uma kala gooshaan, gaari Hargeysa u socda oo canbe Jillib ka qaadaana in la arko waxay tahay qof riyoonaya!
Guuxa dhallinyarta waa su’aalo aysan jawaab u helayn, waxaa ka mid ah; goormaan si xor ah annagoo gaadiidkeena wadana isaga kala gudbi doonaa gobollada wadanka? Waa riyo wanaagsan, waxay tilmaamaysaa inay jirto doonis, waxayna la mid tahay su’aashii dhallinyartii SYL is waydiinaysay oo ahayd, sidee ku heli karnaa dal Soomaaliya ah oo xor ah, oo calan leh?
Hammigii SYL waxaa hortaagnaa qabyaalad iyo danihii gumaysiga oo isku milmay, qofkii xornimo ka hadlana xarig iyo dil ayuu ahaa. Dhalinyarta maatana waxaa hortaagan danihii qabiilka, danley diin ku dilaya iyo dano shisheeye oo isku milmay, qofkii Soomaali dan ay leedahay ama mid nabadeed ka hadlana meelo badan xarig ayuu mudanayaa.
AUN Abwaan Cali Xuseen oo ka tirsanaa SYL wuxuu yiri isagoo geeraar uu dadka kula hadlayey tirinaya:
Soomaali baan gedeed aqaanoo
Guubaabo iga dhamaatayoo
Geesi kuu dirira iyo gacal baadan lahaynoo
Gafuur taagga qabiilkiyo
Iyadaa is gubaysa oo
Inay kuu garaabto oo
Marna taas garan mayso
Riyadda wanaagsan iyo niyadda fiican ee ka buuxda kumanaanka dhallinyarada Soomaaliyeed ee ah inay helaan xornimo ay dalkooda oo nabad ah ku tamashlayn karaan, gabdhaha quruxda badan ee Soomaaliyeed kula haasaawi karaan, inay dhici doonto? Waxayse u baahan tahay adiga akhrinaya qoraalkaan inaad hawshaas inay dhacdo aad qayb ka qaadato.
WQ: Maxamed Xasan Cirro
Maqaalo Kale 310 Wararka 21351